သူတို့ဟာဒီသင်တန်းကို Marketing Class မှာမသင်ခဲ့ဖူးဘူး Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 11, 2014 Douglas Karr
အဲဒါဟာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ရောင်းဝယ်မှုနဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွေမှာမကြာခဏလျစ်လျူရှုခံရတဲ့အအောင်မြင်ဆုံးမဟာဗျူဟာကတော့ငါပဲလို့ယုံကြည်တယ် သင့်ရဲ့ကွန်ယက်တန်ဖိုး။ လူများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စာရင်းအင်း၊ သုတေသန၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ဒီဇိုင်း၊ အင်္ဂါရပ်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစသည်တို့အပေါ်ပြန်လာခြင်းကိုအာရုံစိုက်လေ့ရှိသည်။ ဒါတွေအားလုံးကကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုအသေးစိတ်ပြောပြမယ်ဆိုရင်၊ မင်းတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သန်ဖို့နဲ့ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုအပ်တဲ့ပိုက်ဆံလမ်းကြောင်းကိုတစ်ယောက်မှမပေးနိုင်ဘူး။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဟာပရိသတ်ကို (သို့) အသိုင်းအဝိုင်းမရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ ရင်းမြစ်မှာအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်သည်မလွယ်ကူကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည် ရောင်းချ, ပြtheနာရှိသူနှင့်သင်၏ဖြေရှင်းချက်အကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါဟာအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တွေတီထွင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ဆန်းသစ်တီထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုရောင်းဖို့ကွန်ယက်မရှိခဲ့ဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက် ... တကယ်က crappy ထုတ်ကုန်တွေကစျေးကွက်ထဲကိုရောက်အောင်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါဟာကြီးကျယ်တဲ့ထုတ်ကုန်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲပရိသတ်တစ်ခုရှိလို့ပါ ယုံကြည်စိတ်ချရ ကုမ္ပဏီကရောင်းသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီများ၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သမျှလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်ပါ။ အဲဒီအစားငါကလူအတွက်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ လူအများနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ လူအများကူညီရန်၊ ထိုက်တန်သူများကိုအာရုံစိုက်ရန်နှင့်ရောင်းရန်မောင်းနှင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်တိုက်ရိုက်အကျိုးကျေးဇူးမရှိသောအခွင့်အလမ်းများအတွက်အချိန်နှင့်ခွန်အားကိုပင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်ယူသည်။ ဒါဟာအားလုံးကွန်ယက်သည်အဘယ်သူမူတည်သည်။
သူတို့ကွန်ယက်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ငါသိတဲ့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတချို့ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပဌမ ကုမ္ပဏီသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ မြင့်မားသောဖိအားများရောင်းချခြင်းမှတစ်ဆင့်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ လာမယ့် ကုမ္ပဏီအပြားကျသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ယုံကြည်မှုမရှိတော့လို့ပဲ ဒါကြောင့်တောက်ပသောကုမ္ပဏီများသည်အတွေ့အကြုံ (သို့) အရည်အချင်းပေါ် မူတည်၍ ငှားရမ်းခြင်းမပြုသည်။ သူတို့သည်သင်သူတို့ကိုယူဆောင်လာသည့်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်အခြေခံလေ့ရှိသည်။ အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင်၏ကွန်ယက်သည်သင့်ထက်များစွာတန်ဖိုးရှိသည်။ သင်၏ကွန်ယက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကသင်၏အလုပ်ရှင်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားပိုမိုတန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ငါ့ကိုမယုံဘူးလား သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အောင်မြင်မှုရနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြည့်ပါ။ သူတို့နှင့်အလုပ်လုပ်သောဖောက်သည်များနှင့်ရောင်းချသူများ၏ကွန်ယက်များကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါ။ လူတွေက ၀ င်ငွေရတယ်။ ထုတ်ကုန်တွေ၊ အင်္ဂါရပ်တွေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကို online တွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သော်လည်းရည်မှန်းချက်မှာရောင်းရန်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကွန်ယက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းအကြားကွာဟချက်ကိုတံတားတစ်ခုဖြင့်ဖြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်မှု.
ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖောက်သည်များမှာကျွန်ုပ်တို့နှင့်အချိန်အတန်ကြာအတူရှိနေပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကိုးစားသူများဖြစ်သည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေမှာအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ထားတယ်။ သူတို့ကွန်ယက်အတွင်းယုံကြည်မှုရှိပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းဆုံးရည်ညွှန်းချက်များလည်းယူဆောင်လာသည်။ သင်၏ကွန်ယက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
Tags: ကွန်ယက်တန်ဖိုးလူမှုရေးကွန်ရက်soical ကွန်ယက်ကို